सिल्टलले बताउँछ किन मोजाडालाई बेस्ट डाटा स्क्रैपिंग उपकरणहरूको लागी विचार गरिएको छ
डेटा स्क्रैपिंग एक विशेष डोमेनबाट डाटा सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया हो। parsable formats जस्तै XML, CSV, वा TSV. यो प्रक्रिया डेटा निष्कर्षबाट फरक छ किनकि निष्कर्षण सामान्यतया धेरै डोमेनबाट डेटा संकलन गरेर प्रदर्शन गरिन्छ.
डेटा स्क्रैपिंग सेवा को लागि मांग यसको धेरै फायदाहरु को कारण मा बढेको छ।. यसैले वेबबाट कुनै पनि जानकारी प्राप्त गर्न धेरै उपकरणहरू विकसित गरिएका छन् - tours ica huacachina. दुर्भाग्यवश, अधिकतर उपकरणहरू सिद्ध छैनन् र धेरै खतराहरू छन्. यद्यपि, त्यहाँ त्यहाँ धेरै उत्कृष्ट सुविधाहरू छन्, र यो मोजेन्डा हो.
डेटा स्क्रैपिंग को लाभ
मोजाडा संगठन र व्यक्तियों को संपर्क जानकारी एकत्रित गर्न सक्छन्. सम्पर्क जानकारीको स्क्रैपिंग दुनिया भर मा बिक्री संगठन र मार्केटिंग सेवा प्रदायकहरुको लागि आवश्यक छ. (1 9) वेब स्क्रैपिंग प्रविधिको विकासको साथ, यो तपाईंको सेवा र उत्पादनहरू प्रस्ताव गर्न व्यक्ति र संगठन खोज्न निकै सजिलो भएको छ।.
कुनै पनि सम्पर्क जानकारीको लागि सजिलो पहुँचले मेलिङ सूचीहरू, इमेल सूचीहरू, र यहाँका कलहरूको सूची पनि सङ्कलन गर्न सजिलो बनायो।. माथि उल्लेख गरिएको फाइदाको अतिरिक्त, नियमित रूपमा जानकारी स्क्रैप गर्ने अन्य कारणहरू छन्:
1. प्रतिस्पर्धात्मक अनुसन्धान: कम्पनीहरूले विभिन्न प्रतिस्पर्धी कारणहरूको लागि डेटा निकाल्छन्. उदाहरणको लागि, कम्पनीहरूले मूल्यहरू जान्न चाहन्छन् कि तिनीहरूका प्रतिस्पर्धाहरू निश्चित उत्पादन र सेवाहरूको लागि प्रस्ताव गर्छन्.
2. भू-लक्ष्यवर्णन र समूह: डेटा उचित प्रोफाइलको लागि स्क्रैप गरिएको छ. यसले कम्पनीलाई स्थान-आधारित मार्केटिङ अभियान चलाउन सक्षम बनाउँछ र यसरी तिनीहरूका मार्केटिङ प्रयासहरूको प्रभावकारिता बढाउँछ. उदाहरणका लागि, डेटन, ओहियोमा एक स्पा चलाउने कम्पनीले डेटनका बासिन्दाहरूलाई मात्र मार्केटिङ सन्देशहरू पठाउनुपर्छ. सिन्सिनाटीका बासिन्दाहरूलाई पठाउँदा कुशल हुने छैन किनभने यो सम्भव छैन कि कसैले यात्रा गर्नेछ केहि स्पा सेवाहरू प्राप्त गर्नका लागि।.
3. मार्केटिङ अभियानहरू: पहिल्यै उल्लेख गरिएको, तपाईंले लक्षित दर्शकहरूको डेटाबेस निर्माण गर्न जानकारीको पहुँच आवश्यक छ.
4. निर्देशिकाहरूको सिर्जना: उदाहरणका लागि, यदि कम्पनीले एक वकीलको सेवा प्रयोग गर्न आवश्यक छ भने, यो वकीलहरूको निर्देशिका जाँच गर्न केहि वकीलहरूको सम्पर्क पनि त्यही शहरमा आधारित छ.
5. व्यक्ति र व्यवसायिक संस्थाहरूको मूल्यांकन: व्यवसाय साझेदार वा सेवा प्रदायक खोज्दा, डेटा निष्कर्षले कम्पनीलाई यसको सम्भावित साझेदारहरूको मूल्यांकन गर्न मद्दत गर्दछ।. यदि तपाई एक कम्पनी वा व्यक्तिको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने, तपाईंले अनन्तमा उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ.
मोजाडा सफ्ट्वेयर तपाईले आवधिक रूपमा वा मागको आवश्यक डेटा निकाल्न सक्नुहुनेछ. यो प्रयोगकर्ताहरूलाई वेब स्क्रैपिंग कुञ्जीहरू धेरै छिटो सिक्न डिजाइन गरिएको छ. मोजेडाले ब्राउजर रेन्डरिङ प्रविधि प्रयोग गर्दछ जुन यसले एक वास्तविक मानव प्रयोगकर्तालाई नक्कल गर्दछ.
प्रयोगकर्तालाई मोबाईल गर्नका फाइदाहरू छन्:
सफ्टवेयरले जाभास्क्रिप्ट र अजाक्सलाई सजिलैसँग सम्भाल्न सक्छ
यसले सजिलै गहिरो वेब पेजहरू
मार्फत सजग गराउन सक्छ। ) यसले लोड ब्राउजर गर्दछ र ब्राउजरको रूपमा पृष्ठहरू नेविगेट गर्दछ
प्रयोगकर्ताहरूलाई नकल गर्न सक्षम भए पनि, मोजाडालाई उत्कृष्ट 24/7 टेक्स्ट समर्थनद्वारा समर्थन गरिएको छ, र यसको प्याकेज प्रयोगकर्ताहरूको लागि केही छोटो ट्यूटोरियल भिडियोको साथ आउँछ। उपकरणको राम्ररी कसरी प्रयोग गर्ने भनेर जान्न. छोटो ट्यूटोरियल भिडीयोहरू छन्:
कसरी पाठ खिच्ने. यसले 43 सेन्टिमिटर लिन्छ
नतिजाको अर्को पृष्ठ कसरी लोड गर्न सक्छ. यसले एक मिनेट र 58 सेकेन्ड लिन्छ
नियमित रूपमा चलाउने कार्यक्रम कसरी निर्धारण गर्ने. यो अवधि एक मिनेट र 8 सेकेन्ड हो
डेटालाई दुई क्षेत्रबाट कसरी मिलाउनुहोस्. यो केवल 1 मिनेट र 16 सेकेन्ड लाग्छ
अन्तमा, मोजान्डामा धेरै सुविधाहरू छन् तापनि, तपाईंले यो प्रयास गर्नुपर्छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण गतिशील वेबसाइटहरू स्क्रैप गर्ने क्षमता हो।.